बीएण्डसीमा पनि स्वाइन फ्लूको उपचार हुने
झापाको विर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पतालले भोलिदेखि स्वाइन फ्लूको उपचार गर्ने भएको छ ।
स्वाइन फ्लूको उपचारका लागि अस्पतालले बहिरङ सेवादेखि नै शंकास्पद बिरामीलाई विशेष रुपमा अन्य बिरामीभन्दा बेग्लै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको बीएण्डसी अस्पतालका डा. दिलीप शाहले बताए ।
स्वाइन फ्लूको उपचारका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष तालीमसमेत लिएर आएका डा. शाहका अनुसार स्वाइन फ्लू लागेका बिरामीका लागि भेन्टिलेटरसहितको आइसीयु (सघन उपचार कक्ष) अनिवार्य भएकाले त्यसको पनि बेग्लै व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वाइन फ्लूको संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउने प्रविधि निकै महँगो भएकाले शंकास्पद बिरामीको नमूना संकलन गरी काठमाडौंमा रहेको सरकारको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइने र त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा उपाचार भने बीएण्डसी अस्पतालमा नै हुने समेत डा. दिलीप शाहले जानकारी दिए ।
स्वाइन फ्लूबाट जोगिनका लागि अग्रीम खोप पनि लगाउन सकिने र उक्त खोप पनि बीएण्डसी अस्पतालले भोलिदेखि नै प्रयोगमा ल्याउने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले बताए । स्वाइन फ्लूको उपचारका लागि बीएण्डसी अस्पतालले सम्पूर्ण तयारी गरेको र सबैका लागि उपचार सहज बनाउन अस्पताल लागिपरेको निर्देशक प्रसार्इंको भनाइ छ ।
स्वाइन फ्लूको संक्रमणको जोखीम बढेसँगै झापामा त्यसको उपचारका लागि बीएण्डसी अस्पतालसँग सरकारीस्तरबाटै सम्झौता गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, झापाका फोकल पर्सन कुलबहादुर पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार झापामा हल्ला भए जस्तो स्वाइन फ्लूको खतरा नरहेको र अवस्था सामान्य तथा नियन्त्रणमा नै रहेको छ । रासस
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २६, २०७४, ०१:४५:२९